Tọzdee, Ọktoba 25, 2012 Wednesday, October 24, 2012 Douglas Karr
Kpamkpam hụrụ vidiyo a na mkpọsa, Ahịa bụ BS, si na Adobe na-akwalite Adobe Marketing .gwé ojii. Edeela m posts nke m n'oge gara aga banyere ahia na-ekwu… Ma ọ ka na-eme ka m bụrụ mkpụrụ.
Adobe Marketing Cloud na-enye gi ihe zuru ezu nchịkọta, mmekọrịta mmadụ na ibe, mgbasa ozi, ịchebe na njikwa ahụmịhe nlekọta weebụ yana ezigbo oge nke na-eweta ihe niile ịchọrọ ịma gbasara mkpọsa ahịa gị. Yabụ ị nwere ike ị nweta data site na nghọta ka ị rụọ ọrụ, ọsọsọ na nghọta karịa oge ọ bụla.
Tags: onye nyocha bsahia bsnkwukọrịta ahịaahia bu bslingo ahịaire ere ahịaokwu ahia